Zanu PF Yava Kubata Vanhu Nechisimba Kuti Vasaine Gwaro Renyunyuto
Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti mutungamiri wechimwe chikwata cheZimbabwe National Liberation Warveterans Association, uye vari nhengo yeZanu PF, vaJabulani Sibanda, pamwe nenhengo dzebato ravo vari kumanikidza vanhu kuti vasaine gwaro renyunyuto, kana kuti petition kuMasvingo nekuMidlands.
Gwaro iri rinokurudzira kubvisva kwezvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muZanu PF. Mugwaro rayakaburisa nemusi weChina ZPP yakati nemusi wechipiri mumiriri weGokwe Central mudare reparamende, uye vari nhengo yeZanu PF, Amai Dorothy Mhangami, vakaudza veruzhinji pamusangano wavakadaidzira kuti munhu wese anofanirwa kusaina gwaro rezvirango iri.
Nezuro, ZPP inoti vaSibanda vakadaidzira misangano kuGutu West kunzvimbo dzinosanganisira maTizha Township, Kanongovere Primary School, neSerima Township, apo vanonzi vakavhundutsira veruzhinji kuti vasaine petisheni yeZanu PF iyi.
Sachigaro veZPP, vaWellington Mbofana vakaudza Studio 7 kuti veruzhinji varikusaina gwaro iri sezvo vachitya kushungurudzva neZanu PF.
Asi sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, Ntungamili Nkomo akabatawo vaJabulani Sibanda avo vakati mashoko eZPP aya ndeemanyepo.
Hurukuro naVa Wellington Mbofana
Hurukuro naVa Jabulani Sibanda